राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७३ असोज २४ सोमबार | ११:०२
- जय प्रकाश आनन्द
उ मेरो बाल सखा हो । गाँउमा उमेरले २/३ बर्ष तलमाथी हुनुले साथी बन्नमा फरक पार्दैन । बच्चु कर्ण हुन् यिनी । कत्रो रह्यो होला र मेरो गाउँ त्यस बखत ? मेरा पूर्वजहरूको जन्म थलो "चेंगहा" गाँउले मदमत्त कोशीको जल प्रपातमा समाधि लिएपछि त्यहाँबाट बसाई सरी आएका खोभारी साहले कंचनपुरको बजार बसाए ।
मेरो हजूर बा उनै खोभारी साहका ज्वाई हुन् । तर, मेरो ठूलो हजूर बा खलकमा महादेव साह बडो नाम चलेका ब्यापारी थिए । मैले बालकाल मै उहाँको पसलमा रोलेक्स र स्वीस मेड टाईटस घडीहरू बिक्न राखेको देखेको थिए । यी दुईटै घडी मैले आजसम्म लाउन पाएको छैन । मेरो बुबा भने हुर्कदै गर्दाको बखतमा "ओमेगा" घडी लाउन पाउनु भयो । मेरो बुबा उनै महादेव साहका भाईको नाती भएकोले त्यस पहिरनको हकदार हो ।
कंचनपुर मेरा पूर्वजहरू र उनका अरू धेरै समकालिनहरूले बसाए । बजार धनधान्यपूर्ण र गुलजार भयो । तर, छोरा नातीहरूले पढन पाएका थिएनन् । नेपाल काठमांडूमा राणाहरू बेलायत र पेरिसको भ्रमणबाट देखेर सिकेर ठूल्ठूला दरबारहरू बनाउन थाल्दाको बखतमा मेरो गाउँमा स्कूलसम्म थिएन । स्कूल कल्पना र चाहनाको एक बिषय मात्र थियो ।
मेरो पिता जीलाई कखरा सिकाउने उदित नारायण लाल दास ९० सालको भूईचालो मेरै गाउँमा भोगेका थिए । उनलाई भारत, बिहारको मधुवनीबाट शिक्षकको रूपमा गाउँ ल्याईएको थियो । स्कूल त छदै थिएन, गाउँका ठूलो गोलाको ब्यापारिक बरण्डामा सबै बालकहरूलाई जम्मा गरी ट्युसन पढाउने काम थियो उदित नारायण लाल दासको । उनको अर्को महत्वपूर्ण अभिभारा थियो; ट्युसन पढाएर तयार गरिएको हुर्कदै गरेका केटाहरूलाई हरेक बर्ष मधुबनी वा दरभंगा लगी त्यहाँको स्कूलका मार्फत बिहार बोर्डको परीक्षा दिलाउनु । आज पनि मेरा गाउँका ७५/८० बर्ष उमेर नाघ्दै गरेका बयोवृद्धहरू तिनताकको शिक्षाको त्यस दुरूह अभ्यासलाई संझिरहेका हुन्छन् । उमेरमा ८७ पार गर्दै गर्नु भएका मेरो पिता जी पनि यही अनुभव राख्नु हुन्छ ।
उनै उदित नारायण लाल दासका साखै भतिज हुन् मेरा साथी बच्चु कर्ण । दाजु उदित नारायणले बच्चुका बुबा लक्ष्मी नारायण लाल दासलाई बिहारको आफ्नो गाँउबाट लिई आएका थिए । लक्ष्मी नारायण लाल दासलाई हामी धेरैले पहडिया माष्टर भन्थ्यौं । अचम्भ थियो, उदित नारायण बजारमा बस्थे; जहाँ बढी बनिया ब्यापारीका बच्चाहरूलाई पढाउथे । उनको साख्यै भाई लक्ष्मी नारायण लाल दास भगवतपुर अर्थात रूपनगर गई पर्वते समुदायका धनीमानीका बच्चाहरूलाई पढाउथें । एउटै परिवारका दाजु भाईले छुट्टा छुट्टै समुदायका बच्चाहरूलाई पृथक पृथक स्थानमा रही पढाउने गरेकै कारणले हामी पछिसम्म लक्ष्मी नारायण गुरूलाई "पहडिया माष्टर साहेब" भन्थ्यौं । आजको जस्तो विभेदको शिक्षा पाएर "खसवादी" भनिने चेतले कदापि पनि हामी उहाँलाई पहडिया माष्टर साहेब भनेका थिएनौं ।
आज जस्तो कंचनपुर र रूपनगर जोडिएको थिएन । दुई किमी को उ बेलाको दूरी पार गर्न सबैलाई कठिन थियो । दुई गाँउका बीच मानिस हराउने झारीहरूको जंगल थियो । मानिसहरू हत्तपत्ति यताउता जानआउन डराउथे । रूपनगरमा शुरू देखि नै पर्वतेहरूको घना बसोबास थियो । सरकारी जागिरमा रहेका बस्नेतहरू, पोखरेल, नेवारहरू, गजुरेल र ढकाल आदिको उल्लेख्य बसोबास थियो । तिनताकमा सबै भन्दा ठूलो सरकारी अड्डा भनेकै वन अड्डा हुन्थ्यो । वनमा लप्टन बस्थे, जस्को नियुक्ति सोझै काठमांडूबाट तीन सरकारले गर्थ्यो । स्वभावत: वन त्यस बेला सरकारको लागि राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत थियो, यसर्थ त्यस उपर प्रत्यक्ष नियन्त्रणका लागि दर्विलो नियुक्ति हुनु ठिकै थियो । यस प्रकारका प्रभावशाली मानिसहरूको छोराहरूले पढन पाएका थिएनन् । यसै निम्ति रूपनगर तिरबाट उदित नारायणलाई बोलाहट भै तत्काल छुट्टै एकजना देसी माष्टरको व्यवस्था गर्न अर्हाईएको थियो । यसो नगरे स्वयं उदित नारायणको नै उठिबास हुने हुँदा उनले आफ्ना भाई लक्ष्मी नारायणलाई कंचनपुर झिकाएका थिए । केही बर्षअघि लक्ष्मी नारायणको देहावसान भयो । मृत्यूपूर्वसम्म पनि लक्ष्मी नारायण गुरू रूपनगर तर्फ नै बढी बस्दथे ।
हो मेरो गाँउमा शिक्षाको प्रसारमा यी दाजुभाई र पछि यिनैले झिकाएका यिनका भतिज बंशी बिहारी लाल दासको अद्वितीय योगदान छ । उदित नारायणले मेरो बुबालाई पढाउनु भयो । भतिज बंशी बिहारी लाल दासले मलाई अक्षर ज्ञान दिनु भयो । मैले पढन शुरू गर्दाको बखत गाँउमा स्कूल खुलीसकेको थियो । तर, कुनै पुस्तक पसल भने थिएन । कोर्सका पुस्तकहरू सदैव एउटै खाले हुन्थ्यो । पुस्तकहरू बुबाबाट छोरासम्ममा, दाजु वा दिदीबाट भाईहरुमा सुरक्षित हस्तान्तरण हुन्थ्यो । हामी किताबको बडो जतन गर्थ्यौ । मोटो मोटो गाता लाउथ्यौं । यस्तो अवस्थामा कोर्स बाहिरका किताब पाउनु नै दुर्लभ थियो । यो खाँचो यिनै लक्ष्मी नारायण लाल दासले पुरा गराउनु भयो । दाजु उदित नारायणको सल्लाहबाट यिनले सरस्वती पुस्तक भण्डार खोल्नु भयो । तर, पसलको रुपमा हैन । गाँउमा आईतवार र बिहीवार हटिया लाग्द्थ्यो । वरिपरिको गाँउहरूमा पनि यसरी नै हटियाको चलन थियो । यस्ता हटियाहरू नै किनमेलको मुख्य स्थल हुन्थ्यो । लक्ष्मी सरले यही हटियामा जुटको चट्टी वा गुन्द्री ओछ्याउन लाएर जेठा छोरा उपेन्द्र नारायण कर्णलाई पुस्तक बेच्ने काममा लगाए ।
यो घुम्ति पुस्तक पसल नै वास्तवमा हामीलाई थोरबहुत रूपमा ज्ञानको भण्डार र संसारसंग जोड्यो । मलाई अक्षर ज्ञानका लागि जीवनमा पहिलो पटक मनोहर पोथी र वर्णमाला यहीबाट उपलब्ध भयो । मलाई आज लाग्दछ, ती ससाना मनोहर पोथी र वर्णमाला मात्र थिएनन् अपितु मेरा लागि ती पुस्तकहरू उही बेला "ओरेजिन अफ स्पेशिज", "वेल्थ अफ नेशन्स", "दास क्यापिटल", "ग्रामर अफ पोलिटिक्स", "गोस्पेल अफ फ्रिडम", "वन डे इन द लाइफ अफ इभान देनिसोभिच" आदि ईत्यादी सबै थिए ।
आठ, नौ कक्षा तिर पुगेपछि हामीले त्यहीं चट्टी पसलबाट हिडेन ट्रेजर ग्रामर, केपी बसुको अलजेब्रा, पिसी रेन कम्पोजिशन, रसायण की परिभाषा, एभरेष्ट रिडर पार्ट १ र २ र यादव चन्द्र चक्रवर्तीको गणितहरू पायौं । हाम्रा बाबु बाजे र समाजका अग्रजहरू यहींबाट आर्युवेद, ऋगवेद, साम वेद, चतुर्वेद, गीता, रामायण, महाभारत तथा हनुमान चालिसाहरू प्राप्त गरे । हामीले कोर्सका पुस्तक बाहेक तोता मैना की कहानी, ईन्द्र जाल, नल दयमन्ति, सिरि फरहाद, बाला बिसहरि, हिर रांझा, अकबर बिरवल, अल्हा रूदल, सलहेस, विद्यापति, महाराणा प्रताप, सिवाजी राव, गांधी, नेहरू र तिलकलाई पढ्यौ, चिन्यौ । वास्तवमा म स्वयं र मेरा पुस्ताको निर्माण भयो लक्ष्मी नारायण गुरूको चट्टीमा चल्ने सरस्वती पुस्तक भण्डारबाट ।
पसल के थियो, यौट रबर स्टाम्प थियो-सरस्वती पुस्तक भण्डार, कंचनपुर, सप्तरी नेपाल, भाया:पोष्ट कुनौली, बिहार कुँदिएको । उनले झिकाएको सबै पुस्तक र फोटोहरूमा निलो रंगमा यो स्टाम्प हानिएको हुन्थ्यो ।
नेपालको हाम्रो भू-भागमा आउने सबै चिठ्ठी पत्रमा मुकाममा हाम्रो गाँउको नाम र पोष्टमा बिहारको कुनौली, जिल्ला सहरसा नै लेखिएको हुन्थ्यो तर, हाम्रो अविचलित राष्ट्रीयता नेपाली नै थियो । अहिले जस्तो बात्तैपिच्छे र बेतुकका सवालहरूमा हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्दैन्थ्यो ।
वाराणसीका केही प्रकाशकहरू हिन्दीका रोचक र उपयोगी पुस्तकहरूलाई नेपालीमा अनुवाद गरी छाप्ने गरेका थिए । नेपाली भाषामा गरूड पुराण, सत्य नारायण भगवानको कथा, ईन्द्र जाल पुस्तक मोहिनीको नाममा अनुदीत थियो । केही पछि देवकोटाको मुना मदन पनि चट्टी पसलमा आयो । हाम्रो गाँउमा त्यसबेला पनि मुसलमानहरूको घना जनसंख्या थियो । तर, एकाध मदरसा मात्र थिए । मदरसालाई ध्यानमा राखी लक्ष्मी सरको पसलले मुसलमानको आमसी पारा, नियत नामा र अली वे जस्ता पुस्तकहरू झिकाएको हुन्थ्यो ।
हो, निसन्देह धेरै पुस्तकहरू हिन्दी भाषाको नै थियो । मलाई आजपनि याद छ, यी मध्येका प्रायस: पुस्तकहरू "बाबू ठाकुर प्रसाद एण्ड सन्स, कचौडी गली, वाराणसी", "लोकनाथ पुस्तकालय, गाबिन्द मित्रा रोड, कलकत्ता" र "प्रसाद एण्ड को. खजांची रोड, पटना" बाट प्रकाशित एवं मुद्रीत थियो ।
उ बेला पुलीसहरू आएर राजाको फोटोहरू झिकाएर बेच्न भन्थे । "श्रीहितैषी कंपनी, कर्णघंटा, वाराणसी" राजाका फोटोहरू छापेर पठाउथे । यस प्रकाशनका मालिक वाराणसीमै रहने नेपालीहरू लखन केसी, मखन केसी थिए । यिनै केसीद्वयका दिदी अम्बिका केसी पछि सप्तरी जिल्लाको सिडिओ भएर आई ।
भगवानको फोटोमा सरस्वती र महादेवको फोटो हरबखत बिक्री हुन्थ्यो । प्रायस: हरेक विद्यार्थीले अवश्य नै सरस्वतीको फोटो राख्ने गरेका थिए । दिपावलीमा लक्ष्मीको, दुर्गा पूजामा भगवतीको फोटोहरू खुबै बिक्री हुन्थ्यो । यस्ता फोटोका चित्रकार आर. के. शर्मा, राजा रवि रायहरू थिए । भारतका यी सुविख्यात चित्रकारहरूले ढुंगाका मूर्तिको रूपमा ईट र पथ्थरका किल्ला जस्ता राजा महाराजहरूको कडा नियन्त्रणमा रहने मन्दीरहरूबाट देवी देवतालाई सर्व साधारणको घरका भित्ताहरूसम्म पुर्याउन ठूलो भूमिका निभाएका छन् । मेरो विचारमा त यी चित्रकारहरूले हिन्दू धर्मका धर्मांध ठेकेदारहरूको असहिष्णु चंगुलबाट हिन्दू देवी देवतालाई हिन्दू दलितहरूको पनि अाँखाको नानीमा प्रवेश गराए, जुन समुदायलाई वेद पढनु त के सुन्नु पनि वर्जित थियो । सुन्नेको कानमा सिसा पघालेर हाल्ने गरिन्थ्यो ।
सरस्वती पुस्तक भण्डार धेरै पछि बजारको काठे गुम्टीमा प्रवेश पायो । मधेसका बजारहरूमा काठबाट बनाईने ससाना घर जस्तै गुम्टीहरू हुन्छन् । बहुधा यस्ता गुम्टीमा पानका पसलहरू राख्ने गरिन्छ । यस्तै एक गुम्टीमा मेरो साथी बच्चु कर्णले सरस्वती पुस्तक भण्डारलाई स्थान्तरित गरेर नाम बदले "शारदा पुस्तक भण्डार" । तरपनि मेरो गाँउमा चट्टी पसल चली नै रह्यो । यो बिडों थाम्न आई पुगे रामचन्द्र झा र उनका छोरा राधे झा । यी बाबु छोराले पनि त्यसपछि बर्षौसम्म हाट बजारमा पुस्तकहरू बेची रहे ।
उमेरमा शायद २/३ बर्ष जेठो भएर पनि यो बच्चु मेरो साथी भयो । यसको कारण थियो, मलाई पुस्तक मन पर्दथ्यो । बच्चु पुस्तक पसले थिए । आज धेरै समयपछि मैले मेरो गाँउको धुलाम्मे बाटोमा मेरो बाल सखा बच्चुलाई भेटें । खुब सम्झे पुराना कुराहरू । नहरको बाटो हिडेर धेरै हाँसे । रमाईलो गरे । जय प्रकाश आनन्दको फेसबुकबाट